Sirta Ka Dambeys In kim jong un uu Musqushiisa Horay u soo qaato | Xaqiiqonews
Sirta Ka Dambeys In kim jong un uu Musqushiisa Horay u soo qaato
Ka dib markii Kim jong un uu soo gaaray Singpore si uu ula kulmo hogaamiyaha mareykanka Donald Trump ayaa waxaa jira laba arin oo soo jiidatay indhaha dadka.
Xaqiiqonews-Wararka Dibadda, Caafimaadka
Muuqaal ay baahisay wakaaladda wararka ee Reutrs ayaa waxaa lagu arkay qaab cajiib ah oo laa ilaalinayo Kim Jong, iyadoo dadka ilaalinaya ay yihiin dad dhadheer oo la soo xulay, waxaana muuqaal lagu arkayaa iyagoo daba socdo kuna hareereysan baabuur madow oo uu saaran yahay Kim Jong Un.
muqaalkani ayaa la qaaday markii Kim Jong Un uu ka soo baxay hoteel uu shir kula lahaa ra,iisal wasaaraha Singpore Lee Hsien Loong.
Arinka kale ee xiisaha leh waxa uu ahaa in Kim uu musqushiisa horay u soo qaatay, iyadoo shalay isniintii majaladda Business Insider magazine ay baahisay in madaxweyne Kim uusan iska reebin musqushiisa meel walbo uu tago.
Warar hoose ayaa waxa ay sheegayaan in dhaqamada noocan ah ee madaxweyne Kim Jong Un u jeedkooda in uu yahay in laga hortago in Sirdoonada Mareykanka ay baaraan saxarada Kim Si markaasi u ogaadaan xaaladiisa caafimaad.